careers | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar
မင်္ဂလာပါ, visitor! [ Register | Login ] RSS
Used Cars (1074)	Sedan (310)
Car Permit (10)	Old Car Permit (10)
Oversea Worker/Seamen Permit (0)
Search CIF Prices
Home » Posts tagged with 'careers' 1
MyanmarCarsDB.com အတွက် အလုပ်ခေါ်ကြော်ငြာ
admin | Article | March 6, 2012
MyanmarCarsDB.com သည် ၂၀၁၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ရက်နေ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် ကားဈေးကွက်တွင်းမှ ရောင်းသူဝယ်သူ အကျိုးဆောင်သူ အများပြည်သူတုို့အတွက် အသုံးဝင်နုိုင်ရန် စတင်ခဲ့ပြီး နှစ်လအတွင်း ကားပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကို လာရောက်ကြည့်ရှုသူ ၁၈၀၀၀ ကျော်က ကြော်ငြာများကို အကြိမ်ရေ ၇သိန်းကျော်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ Operation နှစ်လအကြာတွင် Registered User ပေါင်း ၆၀၀ ကျော်ရခဲ့ရုံတင်မက The Voice နှင့် Myanmar Times တုို့မှလည်း သတင်းဆောင်းပါးဖြင့် ဖော်ပြခြင်းခံရပါတယ်။
ယခုအခါ ကျွန်တော်တို့ MyanmarCarsDB မှ ကားအရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းရှင်များ ကြော်ငြာတင်သူ customer များကို ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ၀န်ဆောင်မှုများပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့၌လုပ်ငန်းများ တုိုးချဲ့လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ရာ အောက်ပါ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက် စိတ်ဝင်စားသူများအား ခေါ်ယူလိုပါသည်။ ခေတ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းဈေးကွက်အပြောင်းမှာ industry အဆင့်မှီ အင်တာနက် business တစ်ခုနှင့် စိတ်ဝင်စားစရာ၊ ပညာရစရာ အလုပ်လုပ်ချင်ရင်တော့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့နဲ့သာ ဆက်သွယ်လုိုက်ပါ။
Role: Sales & Marketing Assistant
- English လို အခြေခံ ပြောနိုင် ဆိုနိုင် ရေးနိုင်သူ
- Online business, Social Media နှင့် Online Marketing ၏သဘောကို နားလည်တတ်ကျွမ်းသူ
- Marketing, Public Relation (သုို့) Business Development များနှင့်ပါတ်သက်ပြီး နာမည်ရှိ သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှ certificate ရရှိပြီးသူ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိသူ များကိုဦးစားပေးမည်။
- MyanmarCarsDB ၏ Sales/Marketing ပိုင်းအား မြှင့်တင်ရေးအတွက် Plan များရေးဆွဲရာ၊ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပါဝင်ကူညီရန်
- သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် Sponsorship, Partnership deal များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ယူရန်
- Media နဲ့ သတင်းရေးရာကိစ္စများတွင် MyanmarCarsDB ကို ကိုယ်စားပြု ပြန်ကြားပေးရန်
- Operation Director ကို တိုက်ရိုက် report တင်ရန်
စိတ်ပါဝင်စားပါက admin@myanmarcarsdb.com ကို Cover Letter, Resume ကို ပို့လိုက်ပါ။ Facebook, LinkedIn, Twitter နှင့် Blog တုို့ (ရှိရန်မလုိုသော်လည်း) ရှိပါက Email ထဲမှာ ထည့်ပေးပါရန်နှင့် မြန်မာကားဝယ်ရောင်းဈေးကွက်၏ အခြေအနေနှင့် MyanmarCarsDB ၏ သက်ရောက်မှုနှင့် ပါတ်သက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနုိုင်ငံ မြန်မာနုိုင်ငံသားများသုို့ ရည်ရွယ်သော အင်တာနက်ပေါ်မှ စီးပွားရေးများနှင့် ပါတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း လျှောက်ထားသူ၏ အမြင်ကို စာတစ်ပုိုဒ်ခန့်မျှရေးကာ ထည့်ပေးပါရန်။
1,515 total views,2today
TATA Nano ကို ဈေးသက်သာစွာဖြင့် မေလစရောင်းမည်
by admin on April 27, 2013 - 11 Comments
ကားတာယာတွေ ဘေးမှာရေးထားတဲ့ စာတွေက ဘာတွေလဲ
ယခင်တစ်ပါတ်က ကျွန်တော်တို့ Facebook Page မှာ share ခဲ့သည့် tyre code များကြည...
မြန်‌မာနိုင်‌ငံသို့ Ford လာပြီ
by admin on May 1, 2013 - 8 Comments
US ကားထုတ်‌လုပ်‌ရေး ကုမ္ပဏီ Ford သည်‌ မြန်‌မာနိုင်‌ငံသို့ ဝင်‌�...
ယာဉ်ကြောပြဿနာကြောင့် အဌားယာဉ်များ မီတာစနစ် အသုံးမပြုနိုင်ဟုဆို
by admin on April 30, 2013 -3Comments
ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် အနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ယာဉ်ကြော�...
by admin on May 9, 2013 -2Comments
ဒီတစ်ပါတ်အတွင်း ကားလောက၏ သတင်းများကို စုပေါင်းတင်ပြလိုက�...
Arfar - "ဈေးများလိုက်တာ"...
Arfar - "ဈေးနှူန်းလဲမရေးထားဘူး"...
phyomg - "အပေါ်ဆုံးကလို အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ comment မျိုး ဒီဆိုက်မှာ လက်မခံပါ"...
ကိုထွေး - "Yemin km ကဘာလို့30kဖြစ်နေရတာလည်း"...
Kokyawzaw - "Bro,sait tot ma shi par nae byar,,150.lout htar naing ma lar? A mya kyi ma tat naing lo par"...
CNG ယာဉ်များသက်တမ်းတိုးရန် အဆင်ဖြေလျှော့ခြင်း
Taxi တွေအတွက် အထူးနှု...
by admin on May 8, 2013 -4Comments
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး ပျက်စီးနေသည့် ယာဉ်များကိုပြုပြင်ပြီး ပြန်လည်ရောင်းချရန် ပြည်တွင်းယာဉ်ရောင်းချရေး ကုမ္ပဏီ သုံးခုက တင်သွင်းလာကြောင်း မော်တော်ယ...
US ကားထုတ်‌လုပ်‌ရေး ကုမ္ပဏီ Ford သည်‌ မြန်‌မာနိုင်‌ငံသို့ ဝင်‌‌ရောက်‌‌တော့မည်‌ဖြစ်‌‌ကြောင်း ‌ကြေငြာလိုက်‌ပါသည်‌။ Ford သည် ၁၉၀၃ မှ စတင်ကာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် မော...
ယာဉ်ကြောပြဿနာကြောင့် အဌားယာဉ်များ မီတာစန...
ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် အနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ယာဉ်ကြောအခြေအနေကို မခန့်မှန်းနိုင်သောကြောင့် အဌားယာဉ်များတွင် မီတာစနစ်ဖြင့် ယာဉ်စီးခကောက်ခံရန် အခက်အခဲရှိကြောင်းေ...
ကားတာယာတွေ ဘေးမှာရေးထားတဲ့ စာတွေက ဘာတွေလ...
ယခင်တစ်ပါတ်က ကျွန်တော်တို့ Facebook Page မှာ share ခဲ့သည့် tyre code များကြည့်နည်းကို လူနှစ်သက်ကြတာ သိရတဲ့အတွက်၊ Facebook မှာ မတွေ့လိုက်ရသူ MyanmarCarsDB ၏ ဧည့်...
About Us	MyanmarCarsDB.com isaclassified cars listing site for Myanmar Car Market. We provide the number one online advertising services for buyers, sellers, agents, dealers and importers.
Instantly advertise cars to sell or find your dream cars inafew clicks.
နောက်ဆုံးသတင်းများ	တစ်ပါတ်အတွင်း ကားလောကသတင်း
နောက်ဆုံး Forum Topic များ
Toyota Hilux Surf	Light truck (1 ton) toyota, nissan ၀ယ်လိုသည်	Good Morning Everyone	1300 cc car Tyres	Facts to be careful before purchasingacar	ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများHonda Fit L Package (55 views)Hillux SURF (53 views)TOYOTA CROWN ROYAL SALOON - G (52 views)HONDA CR-V 99 (52 views)2007 TOYOTA ISIS 2.0 PLATANA (7 seater) (39 views)MarkII Groire(Diesel) (36 views)2011 Belta X-L Pakage(like New) (34 views)caldina 2002 zt (32 views)BELTA (29 views)2011 Suzuki Swift (26 views) © 2013 MyanmarCarsDB – No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar. All Rights Reserved.